बहिष्कार शब्द सुनेर चुनाव बहिष्कार गर्न थाल्या हो कि नभन्ठान्नु होला । यो बहिष्कार ती नालायक सन्तानहरुलाई समाज र आफन्तले गर्ने हो जसले आफ्नाजन्मदातालाई जीवनको सन्ध्या बेलामा घररबाट निकालि दिन्छन् वा वृद्धाश्रममा जान वाध्य पार्दछन् ।
जुन गर्भमानौ महिना पालिन्छन्, जुन हातले लालन, पालन गरेर जिन्दगी सँवारिदिन्छन् । जब तिनै काँतर हातहरुलाई सन्तानको भर र माया चाहिन्छ तब निष्ठुरी सन्तानले राम्रोसँग हेरचाहगर्दैनन् तथा घरबाट निकालिदिन्छन् ।
मातापिता त त्यो वट वृक्ष हुनजो आफ्ना सन्तानलाई जिन्दगीभर मायाको शीतल छाँया दिरहन्छन् र तिनै अपराधी सन्तानले उनीहरुको वृद्धावस्थालाई आफ्नो बेवास्ता र कठोर व्यवहारको घामले पोलिदिन्छन् । कस्तो अचम्म है सालनालसँग जोडिएको सन्तान र अभिभावकको सम्बन्धजो ईश्वरले पनिनकार्न सक्दैनन् एकदिन घरको दैलो नाघेर वृद्धाश्रममा पुर्याइदिन्छन् ।
पति, पत्नीको सम्बन्धजति नै प्रेमिल र गहिरो भएपनि मन नमिलेपछि छोडपत्रमा गरिएको एउटा दस्तखतले सधैंका लागि तोडिन्छ । तर तिनै पति आफ्नी आमालाई बिर्सेर पत्नीको नाममा जमिन किन्छन्, घर बनाइदिन्छन् सुनकागहनाले श्रीमतीलाई झपक्क छोपिदिन्छन् । तर आफ्नी आमालाई दुई छाक खाना र एकसरो लुगादिनतिनै सन्तानलाई गार्हो हुन्छ ।
आमाको नाममा सम्पतिकिन्ने भनेको त सपनै हो अझआमाको नाममाभएको जायजेथापनि उनकै जीवनकालमा बेचेर अशँबण्डा लगाउन नालायक सन्तानले लाजमान्दैनन् । आमालाईदिनु त कताहो कताझन खोसेर वृद्धाश्रम पुर्याइदिन्छन् ।
मेरो एकजना आफन्तलाई उनका माहिला र कान्छा छोरा मिलेर घरबाट निकालिदिए । छोराले आमालाई स्पष्ट रुपमा म तपाइँलाई राख्न सक्दिनकि वद्धाश्रम जानुस् हैन भने आफ्नै घर फर्किनुस् भनेपछि ती७८ वर्षीया वद्धा रुदैं आध ारातमा आफ्नै शहर फर्किन् ।
जहाँबाट अढाइ वर्षअघि सदाका लागि विदावारी भएर उनी कान्छो छोरासँग बस्न र बाँकी जिन्दगी कटाउन राजधानी गएकी थिईन् । तर उनका छोराले मरेपछि उनको क्रियाक्रम गर्नुपर्नेमाउनलाई ज्यूँदैमा घरको न घाटको बनाइदिए । अहिले ती वृद्ध महिला छोराले गरेको तिरस्कार सम्झेर आफ्नो दूर्भाग्यलाई गालीगर्दै रुँदै बस्छिन् । छोराको घरमा जहाँ उनलाई दुई छाक पेटभरि खानपनि गार्हो थियो । अहिले आफ्नो आँसुलाई सित्तनबनाएर गाँस निल्छिन् ।
तर उनको मनको पीडा कसले बुझदिने र न्नयागर्ने ।
कमबेश सबै घरमायही रावणलीला मन्चन भैरहेको छ । आफ्ना सन्तानबाट माता, पिताले सहनु पर्ने पीडा र आँसुको मात्राकम बढी मात्रहो । तिनै निर्विवेकी सन्तानबाहिर समाजका अगाडि दानवीर कर्ण र सत्यवादी हरिश्चन्द्र बन्छन् तर आमाको आँसु पुछ्ने टालो तिनीहरुसँग छैन ।
जुन छोराको बिहाआफैले केटी खोजेर, आफ्नै हातले धूमधामले गरेर आमाले घरमाबुहारी भित्र्याएकी हुन्छिन् । तिनै छोराले बिहाभएको २५ वर्षको वर्षगाँठ मनाउँदाआमालाई सम्झिदैन । एउटै शहरमा २५ मिनेटको दूरीमा बसेको छोराले आफ्नीश्रीमतीलाई सो अवसरमाहीराको टप किनिदिन्छ तर आमालाई भेट्दैन नआशिर्वाद नै लिन्छ ।
आमा बाटो हेरिरहन्छिन् तर श्रीमतीको थाँग्नामा सुतेको छोरो उठ्दैन ।
ती आमालाई आफ्नो कोखाको घाउ जस्ता सन्तानलाई स्याहार्न कतिगार्हेा भयो होला?कति रात तिनी नसुतेर आफ्ना सन्तानलाई सुताइन होलिन् ? तिनको पनि त मन थियो समय थियो तर सबैलाई त्यागेर आफ्नै शरीरबाट बनेको मांसपिण्डलाई आकार दिनमा नै तल्लिन रहिन् ।
तर तिनै सन्तानले डांडापारीको घाम जस्ता भएका आफ्ना अभिभावकको जीवनमा आफ्नो निर्दयी व्यवहारले ग्रहण लगाइदिन्छन् । ६ सन्तानकी आमाती वृद्धालाई एउटा छोराले घरबाट निकाल्दा अर्को छोराले म लैजान्छु वा म राख्छु भनेनन् । न छोरीले म कहाँआएर बस्नुस् भनिन् न तन र मनले जर्जर भैसकेकी आमालाई भेटेर सान्त्वना नै दिनआईन् ।
अझती वृद्धाकी जेठी छोरीले नै भाइहरुलाई आमाको विरुद्ध उचालेर र झगडा लगाएर घरबाट निकाल्नलगाइन् । माकुरालाई उसकै बच्चाले खान्छ भने जस्तै यी वृद्धालाई पनि उनकै सन्तानले रुवाए । आजती वद्धा एक्लैछिन्, रुँदै बडबडाउँदै आफ्नो कालपर्खेर बसेकीछन् ।
सरकारले अब देशका जेष्ठ नागरिकले आफ्नो सन्तानबाट पाएको अवहेलनालाई महसुस गरेर कानुन बनाउन्दैछ । सन्तानको कमाइको १० प्रतिशतआफ्नो मातापितालाई भरण पोषणकालागि दिनै पर्ने नियमल्याउँदैछ । त्यस्तै मातापिताले पनिआफ्नो जीवनकालमै सबै जायजेथा बेचेर सन्तानको घरमा तुम शरणम नहुन दिनका लागि आफ्नो कमाइ या सम्पतिको २५ प्रतिशत आफु बाचुन्जेल बेच्न नपाइने नियम बनाउँदैछ ।
तर मातापताको भरण, पोषणकालागि सन्तानले आफ्नो कमाइबाट दिने १० प्रतिशत रकम सार्है कमभो । बरु यसलाई पनि बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो । तर सरकारले नियम बनाएर केही हुदैन जब सम्ममातापिताको सम्पतिमा सन्तानको कुनै हकनलाग्ने र उनीहरुले आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो सम्पति कसैलाई पनिदिने कानुन बनाइदिए सबै वृद्धाश्रम खालिहुन्थे र सम्पतिकै लागिभएपनि सन्तानले आफ्ना मातापिताको हेरचाह र आदर गर्थे होलान् ?
सन्तानले कमाएको सम्पतिमा बाउआमाको कुनै हक नलाग्ने तर बाउआमाले कमाएको सम्पतिमाचाँहि सन्तानको हकलाग्ने ? यो असामान्य र अन्यायहो ।
न्यायभनेको बराबरी हुुनुपर्दछ । छोराछोरीको नाममा रहेको सम्पतिउनीहरुले बेचबिखनगर्दा बाउआमाको सहमतिवा हश्रताक्षर नचाहिने तर बाउआमाको नाममा रहेको सम्पति बेचबिखनगर्दा भने सन्तानको सहमति र हस्ताक्षर दुबै चाहिने ? देशका जेष्ठ नागरिकप्रति राज्यले गरेको यो ठूलो भेदभावहो । वृद्ध, वृद्धालाई भलै सरकारले वृद्धभत्ता दिन्छ तर यो असमानता हो । यसको विरोध सबैले गर्नैपर्दछ भोली आफु पनि वृद्ध हुन्छु भन्ने सोचेर ।
तर सबैभन्दा जरुरी हो यस्ता कूलँघार सन्तानलाई समाजले बहिष्कार गर्ने । जति नै कानुनबलियो र कठोर बनाएपनिमातापिताको मन आफ्ना छोराछोरीकालागि पग्लिहाल्छ । त्यसैले पहिलाको जमाना छोरा या छोरीले आफ्नो जातभन्दाबाहिर या तथाकथिततल्लतो जातमाबिहागर्दा उनीहरुलाई गाउँबाट निकालिन्थ्यो । उनीहरुले छोएको खान्थेनन् जुन सर्वथागलतथियो ।
तर आफ्नामातापितालाई दुव्र्यवहार गर्ने सन्तानलाई सबै आफन्त र समाजले बहिष्कार गर्ने । उनीहलाई कुनै पनिपारिवारिक उत्सव, चाडपर्व, बिहा, ब्रतबन्धअथवा सामाजिक जमघट तथा सार्वजनिककार्यक्रममानबोलाउने । बिन नबोलाएको भनेर सोधे भनितिमीहरुले आफ्नाअभिभावकसँग सन्तानको कर्तव्य पूरा गरेनौं, उनीहरुलाई आफ्नो परिवारबाट निकाल्यौ, वृद्धाश्रम पुर्यायौ त्यसैले हामीपनितिमीहरुको सामाजिक रुपमा सार्वजनिकबहिष्कार गर्दछौं ।
यदि सबैले जसको द्धरमामातापिता या कुनै पनिअशक्त वृद्ध, वद्धा हेपिएका छन् भने तीनकाआफन्त र सन्तानसँगनबोल्ने छिमेकमा छन् भने आऊजाऊनगर्ने तथाकुनै पनिक्रार्यक्रममानबोलाउने वाभागलिननदिने ।
जब सबैले ती सन्तानलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर बोल्न छोड्नेछन् वाउनीहरुसँगको सम्बन्ध तोड्नेछन् । तब तिनीहरुलाई आफ्नो गल्ति महसुस् हुनेछ । आफुले गरेको नकामप्रति लज्जावोध हुनेछ र पश्चातापगर्दै आफ्नो अभिभावकसँगमाफीमाग्नेछन् ।
आफुाई जन्मदिने अभिभावकलाई हेलागर्नु, जुन जराको आफु हागाँ र फलहो त्यही रुखको जरालाई काट्नु भनेको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक अपराधहो ।
आफुलाई जन्मदिने आमाको कोखलाई लत्याउने र जिम्मेवारी बोक्ने बाउको काँधलाई टोक्ने सन्तान सबैभन्दा ठूला अपराधीहुन् । आफ्ना जन्मदाताहरुसँग छोराछोरीले गर्ने निर्दयीव्यवहार र बेवास्ता सबैभन्दा घृणित अपराधहो त्यसैले यस्ता सन्तानलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नैपर्दछ ।